ဘေဘီလေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း- ၁၁) – Babi Mild Moms Club
09-781 087 208
ဘေဘီလေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း- ၁၁)
Home articles ဘေဘီလေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း- ၁၁)
articles, ဒေါက်တာ အိအိခင်
မေး။ ။ ကလေးရဲ့ မွေးရာပါဆံပင်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရိတ်သင့်ပါသလဲရှင်။
ဖြေ။ ။ မွေးရာပါဆံပင်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရိတ်မလဲဆိုတာထက် သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့ ခေါင်းလျှော်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်လမှ ရိတ်ရမယ်၊ တစ်နှစ်မှ ရိတ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဓလေ့နဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းလို အရမ်းအေးတဲ့အချိန်မှာ သွားရိတ်ရင်တော့ နှာပိတ်၊ အအေးမိပြီး နို့မစို့နိုင်ဘဲ ဖျားတတ်ပါတယ်။ အချိန်အခါ၊ ရာသီဥတုကိုကြည့်ပြီး ရိတ်လို့ရပါတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြရင် ဥာဏ်ရည်နိမ့်ကလေး ဖြစ်လာတတ်ပါသလဲရှင့်။
ဖြေ။ ။ ဥာဏ်ရည်နိမ့်တဲ့ ကလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် ခေါင်းသေးတာ တွေ့ရတတ်တယ်။ တစ်လခွဲ၊ နှစ်လလောက်မှာ မြှူရင်ပြုံးတတ်ရမှာပါ။ မပြုံးတတ်ရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘူး။ ခေါင်းခိုင်သင့်ချိန်မှာ မခိုင်ဘူး။ မထိုင်ဘူးဆိုရင် ဥာဏ်ရည်နိမ့်မယ့် ကလေးတို့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာမရှင့် ကျွန်မရဲ့ကလေးဟာ ညအိပ်နေရင်းကနေ လန့်နိုးတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြို့လည်းထိုးပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲရှင်။
ဖြေ။ ။ ညအိပ်ရင်းကနေ လန့်နိုးတာဟာ လေထိုးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်ဆာလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အိပ်မက်မက်ပြီး နိုးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြို့ထိုးတာက ဗိုက်တအားတင်းနေရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာမရှင့် ကျွန်မရဲ့ကလေး တစ်ခါတစ်ရံ နို့တွေအန်တာ နှာခေါင်းကပါ ပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ကလေးတွေ နို့အန်ရင် နှာခေါင်းကပါ ပြန်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အန်တဲ့အရည်တွေများပြီး အရှိန်နဲ့ထွက်လို့ပါ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ နို့တိုက်ပြီးရင် လေထုတ်ပေးပါ။ နို့တိုက်ပြီးစမှာ ကလေးကို တအားလှုပ်ပြီး မသိပါနဲ့။ နှာခေါင်းကပါ နို့တွေ ထွက်လာရင် နှာခေါင်းထဲ တစ်ရှူးစလေးထည့်ပြီး သုတ်ပေးပါ။ ဒီလိုမလုပ်လျှင် နို့တွေ အာခေါင်ထဲမှာခဲပြီး နှာခေါင်းပိတ်တတ်ပါသည်။
မေး။ ။ မွေးကင်းစမှ ခြောက်လအတွင်း ကလေးငယ်များ ခြင်ကိုက်ရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြင်ကိုက်ရင်တော့ ဘယ်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခြောက်လအောက် ကလေးမှာတော့ တွေ့ရခဲပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ အနှီးကိုလည်း ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးထုတ်ထားတယ်။ မိခင်တွေကလည်း မပြတ်ကြည့်နေတော့ ခြင်ကိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်။ လုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရပါ။
မေး။ ။ ရုတ်တရက် ကလေးကိုယ်ပူလာရင် ဘယ်လိုပြုစုပေးသင့်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ရုတ်တရက် ကလေးကိုယ်ပူလာရင် ရေပတ်သုတ်ပါ။ ကလေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးအောင်ထားပါ။ အင်္ကျီပါးပါးလေး ပေးဝတ်ပါ။ ဒါနဲ့မှမရဘဲ အဖျား 100ံF ကျော်ရင်တော့ ပါရာစီတမောတိုက်ပါ။
About Babi Mild Moms Club
မြန်မာနိုင်ငံ အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ မိဘများရဲ့ ကလေးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ စုစည်းရာလေး အဖြစ် ဖန်တီးပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်များ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ ဆောင်းပါးများ ၊ ကလေးငယ်များကို ငယ်စဉ် အချိန်မှစ၍ မည်ကဲ့သို့ သွန်သင်ဆုံးမရမည် ဆိုသည့် ကလေးပြုစု ပျိုးထောင်ရေး ဆောင်းပါးများ ၊ Dr.Mild ၏မိဘများ နှင့် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍများကို Web Page ထဲတွင် လေ့လာနိုင်အောင် ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။ Babi Mild ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တစ်မျိုးစီ၏ Product knowledge များကို ပြည့်စုံစွာ ဖေါ်ပြထား၍ လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် သာယာလှပသော မိသားစု ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ Babi Mild မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။
Babi Mild Ultra Mild Pure Natural Head & Body Baby Bath
Babi Mild Ultra Mild Pure Natural Baby Lotion
No-9, Ground, Mya Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar.
© 2016 Babi Mild Moms Club. All rights reserved. Ideal Technology.